sleeping – Healthy Life Journal
All posts tagged "sleeping"
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အလုပ်မှာ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာခဏ ခွင့်ယူနေရပါသလား။ ညစဉ် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်အနားယူတာကြောင့် မကြာခဏ နာမကျန်းဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ တစ်ညအိပ်ချိန် ၇-၈ နာရီရှိတဲ့သူတွေက နာမကျန်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေ သိသိသာသာ လျော့နည်းမှုရှိတယ်လို့...
နေ့ခင်းဘက်မှာ စွမ်းအားအပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ညဘက်မှာ အပြည့်အ၀အနားရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်နေ့လုံးလှုပ်ရှားထားရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နွမ်းနယ်မှု ပျောက်သွားပြီး အပန်းပြေသွားအောင် ညဘက်မှာ အနားယူပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ (၁) အိပ်ရာမ၀င်ခင် အပန်းဖြေဖို့အတွက် အချိန်တစ်နာရီပေးပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ သတင်းကြည့်တာ၊ အီးမေးပြန်ဖြေတာတွေကို မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ စာဖတ်ခြင်းနဲ့...
မှန်ကန်တဲ့ အနေအထားနဲ့ အိပ်စက်ရအောင်
———၊ လရိပ်မေ ၊——— အိပ်ရေး၀၀ အိပ်မောကျဖို့ရာအတွက် အိပ်စက်အနားယူတဲ့ အနေအထားကလည်း မှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (၁) မမှန်ကန်သည့် အနေအထား ကျောပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ လှဲလျောင်းတာက ခါးနောက်ကျောနာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရစေပါတယ်။ မှန်ကန်သည့် အနေအထား ပက်လက်အိပ်စက်မယ်ဆိုရင် ပေါင်နဲ့ ခါးအောက်မှာ...
ညတိုင်း အိပ်ရေး၀၀ အိပ်မောကျစေမည့် နည်းလမ်းကောင်း ၇ သွယ်
———၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊——— ညဘက် အိပ်မပျော်သူတွေ၊ ညဘက်အိပ်ပေမယ့် အိပ်ရေးမ၀သူတွေ ညတိုင်း အိပ်ရေး၀၀ အိပ်မောကျစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း ခုနစ်ရပ်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁) ည ၁၀ နာရီခွဲနောက်ဆုံးထားပြီး အိပ်ရာဝင်ပါ ညဉ့်နက်တဲ့အထိ ဘယ်တော့မှ မနေပါနဲ့။ ညတိုင်း...
အိပ်စက်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ အချက်တွေ . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြာပေးပါသည်။ ၊— Q. ညညဆို အိပ်လို့မပျော် ဖြစ်နေပါတယ်။ အိပ်စက်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေရှိရင် ပြောပြပေးပါ ခင်ဗျာ။ လင်းလင်း၊ သီတာလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း။ A. အိပ်စက်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့...
———-၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အများအားဖြင့် အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာအများစုက ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရာအတွက် အိပ်စက်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ ဟော်မုန်းတွေက အိပ်စက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဟော်မုန်းစနစ်က အပြန်အလှန်...
ည ညအိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်နိုင်စေဖို့ တစ်နေ့တာအတွင်း ဘာတွေ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— တစ်နေ့လုံး သင်လုပ်ဆောင်တဲ့ အရာတွေဟာ ညဘက်မှာ အိပ်ရေး၀၀အိပ်စက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝနရီနဲ့ အိပ်စက်မှုဟာ ဆက်စပ်မှုရှိနေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်နိုင်စေဖို့ ဇီဝနရီအလိုက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ နံနက်ခင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝနာရီကို...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ညတိုင်းညတိုင်း အိပ်စက်အနားယူတဲ့အခါ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးပေါ်မှာ အိပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ ခေါင်းအုံးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး အိပ်စက်မှုအရည်အသွေးသာမက အထွေထွေကျန်းမာရေးကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိစေတယ်လို့ပြောရင် ယုံတောင်ယုံမယ်မထင်ပါဘူး။ အဆင်မပြေတဲ့ ခေါင်းအုံးကို ရွေးချယ်မိတဲ့အတွက် ဖြစ်ရတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို သုတေသီတွေက...
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. အိပ်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် ဟောက်သံထွက်ရပါသလဲ ဆရာ။ KoLwin(FB) A. အိပ်စက်ချိန်မှာ ခံတွင်းနဲ့ နှာခေါင်းတစ်လျှောက် လေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တဲ့အခါ ဟောက်သံထွက်တတ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းပိတ်တဲ့အခါ အဖြစ်များပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူတွေရဲ့...